राजनीतिक एजेन्डा छाडेर पर्यटन विकासको एजेन्डा बोक्नु पर्छ : गुरुङ
प्रकाशित मिति: 2016/04/26
कुलबहादुर गुरुङ एलायन्स ट्रेक्स एन्ड एक्सपीडिसनका प्रवन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । विगत लामो समय देखि पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय गुरुङ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ, भने हाल गुरुङ पर्यटन व्यवसायी संघ नेपाल, गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरिरहनु भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलिसक्नु भएको उहाँ पर्वतीय पर्यटनका विशेष जानकार समेत मानिनुहुन्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको पर्यटन विकासमा सरकार, पर्यटन वोर्ड र अन्य पर्यटकीय संघसंस्थाले खेलेको भूमिका र आगामी दिनमा बोक्नुपर्ने एजेन्डाबारे गुरुङलाई गन्तव्य नेपालको पाँच प्रश्न :
पछिल्लो समय टानको गतिविधिलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
टानकोे वर्तमान कार्यसमितिमा आ–आफ्नो पेशा र व्यवसायमा सफल, नयाँ र युवा साथीहरु निर्वाचित भएर जानु भएको छ । जसबाट हामी व्यवसायीहरुले धेरै आशा पनि गरेका छौ । उहाँहरु निर्वाचित भएर गएको ६ महिना पूरा भएको छ । यो अवधिमा सुरुसुरुमा त खासै काम गर्न सकेजस्तो देखिएन । नयाँ एजेन्डाहरु पनि सुनिएर कतै अलमलिए जस्तो लाग्यो । तर पछिल्लो समय केही प्रगति हुदै छ । साथीहरुले देखिने गरि केही कामको थालनी गर्नुभएको छ। जस्तो लाङटाङ पदमार्ग पुर्ननिर्माणको काम सुरु भएको छ । काभ्रेको तिमालमा इन्टरनेशनल मेमोरियल पार्क निर्माणमा गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको जुन निकै सकारात्मक छ ।
तपाईको विचारमा भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको पर्यटन उकास्न टानले तत्कालिन अवस्थामा बोक्नुपर्ने एजेन्डा के थियो ?
हो, टान पर्यटन क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको ठुलो संस्था हो । देशको पर्यटन विकासमा टानबाट राज्यले पनि थुप्रै आशा र भरोसा गरेको छ । त्यसकारण यो अवस्थामा टानले सबै पर्यटकीय संघसंस्थासँग समेत सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपथ्र्यो । जसको कारण भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अन्तराष्ट्रिय जगतमा गएको नकारात्मक सन्देश मेट्न कोशेढुङगा सावित हुनेथियो । तर त्यसको नेतृत्व टानले किन लिन सकेन् ? अहिले म बजारमा सुन्छु नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान विचको सहकार्य विभिन्न कारणले रोकिदा टान गतिशिल हुन सकेन् । तर म भन्छु पैसाकै कारणले सबै कार्यक्रमहरु अड्किनु हुदैन् । पैसा विना गर्ने कामहरु पनि त धेरै थिए नी त्यो किन गर्न सकेन् ?
अघिल्लो दुई वर्ष तपाईहरुले टानमा के गरिदिनुभयो त्यस्तो यो कार्यसमितिले काम नै थाल्न नसक्ने गरि ?
म टानको निर्वातमान कार्यसमितिमा द्वितिय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको थिए । तपाईले भनेजस्तै म पनि कतै–कतै बजारमा सुन्छु अघिल्लो कार्यसमितिका सदस्यहरुले टानलाई भताभूङ्गनै पारिदिए, हामीले त कामनै गर्न सकिएन भन्ने कुराहरु । तर त्यस्तो होइन्, होला केही कुरा नबुझेको भए बसेर समस्या हल गर्न सकिन्छ । म अघिल्ला दुइ कार्यकाल लगातार कार्यसमितिमा रहेर काम गर्दा समेत काम गर्न केही असहज भएको थियो तर अहिले त धेरै साथीहरु नयाँ हुनुहन्छ । त्यसकारण पनि त्यस्तो भएको होला । त्यसकारण केही कुरा नबुझेको भए बसेर समस्या हल गर्न सकिन्छ । हामी निर्वतमान कार्यसमिति सदस्य मात्र होइन् । टानको सदस्य पनि हौ त्यसकारण कुरा गर्नका लागि कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पदैन् । तर यो कुरा चाहि हो, म स्विकार छु पछिल्लो समय चाहेर नचाहेर, जानेर नजानेर पर्यटकीय संघसंस्थामा राजनीति गर्ने कल्चर विकास भएकै छ ।
सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक भ्रमण तथा घुमफिर वर्षलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मेरो व्यक्तिगत कारणले गर्दा घुमफिर वर्ष घोषणा समारोहमा म उपस्थित हुन सकिन् । तर बजारमा व्यवसायीको विचमा छलफल नै नगरि यो घोषणा गरियो भन्ने कुराहरु उठेको छ । जे होस् कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर नेपाल पर्यटन वोर्डले सबै व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर गन्तव्य समेतको पहिचान गरेर घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाई हो । जसको कारण घुम्न जानेलाई समेत यसले अझ अर्को सहजता ल्याउने थियो ।
पर्यटन पुर्नजागरणका लागि अव नेपाल नेपाल सरकार, वोर्ड र अन्य पर्यटकीय संघसंस्थाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
हेर्नुस्, पहिलो त भूईचालो गएको छ महिना सम्म हामीलाई भत्किएका र बिग्रिएका हाम्रा सम्पदा स्थलको फोटो फेसबुकमा पोष्ट गर्दैमा अरु कामका लागि फुर्सदै भएन् । त्यो बेला नेपाल रिभाइवल हुदैछ भन्ने सन्देश दिन हामी चुक्यौ । अब सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी छ । जसका लागि नेपाल सरकार, वोर्ड र सबै पर्यटकीय संघसंस्थाहरु स–साना राजनीतिक एजेन्डा भन्दा माथि उठेर पर्यटन विकासको ईश्यू र एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ । जसका लागि सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने हामी व्यवसायीले पनि पर्यटक आएनन मात्र भनेर बस्नु भन्दा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाहमा सशत्त रुपमा लाग्नुपर्छ ।